सविधान संसोधन :: Hello NEPAL KOREA dot com :: गृह पृष्ठ Home अभिलेखालय Archive हाम्रो बारेमा
About us सोमबार, २०७४ श्रावण ०९ Monday, July 24, 2017 प्रमुख समाचार प्रवासी समाचार EPS/कोरिया गतिविधि अन्तर्वार्ता विचार फोटो भिडियो लेख/साहित्य मनोरन्जन चुटकिला श्रम जिज्ञासा गृह पृष्ठ विचार ताजा समाचार : कोरियाको मुजुमा सम्पन्न वल्र्ड तेक्वान्दो एक्स्पोमा नेपाललाई २२ पदक, पदक विजेता सवै खेलाडि नेवाः पुःच द्धारा सम्मानितकोरियन युवती संग होटेलको लोकेसन सोधेकै भरमा एक नेपाली परे ५ महिना जेल,किम्हे माइग्रेन्ट हाउसले गर्यो सहयोग एन सी सी कोरिया , राजतन्त्र र राप्रपा एनसिसि कोरियाका दाबेदार अध्यक्ष अन्जु केसी द्वारा आफ्नो भावी कार्ययोजना सार्बजनिक ,आगामी नेतृत्व आफुले पाउनेमा बिश्वस्त नेपाल पत्रकार महासंघ कोरिया शाखाले बृहत अन्तरक्रिया गर्ने कोरियाले इपिएस कामदारको बसाइ लम्याउन छुट्टै खालको भिषा प्रणाली लागु गर्ने सविधान संसोधन बसन्तमोहन अधिकारीजन्म र मृत्यु बिचको यो जीवन के को लागी ? खालि हात आयौं र खालि हात जान्छौं । मान, पद र धन प्रयाप्त पछिको सुखसुबिधा र भोगविलासको भनौं भने भौतिक सुबिधा सम्पन्न भए पनि कहिकतै कोही सुखि देख्दीदैनन् । आज कुन र कसको सुख शान्ति, सम्पन्नता र अधिकारको लागि हामी जुधिरहेछौ । अल्झीरहेछौ । हिजो हज्जारौंको बलि चढाएर , रगतको खोला बगाएर , लाखौं टुहुरा बनाएर, बिधुवा र बृद्धको बिचल्ली पार्दै ल्याइएको यो सविधान चौरानब्बे प्रतिशतले पास भएको विश्वको राम्रो र उत्कृष्ट ठहरिएको सबैलाई अवगतनै छ । युद्ध र क्रान्ति समयको माग हो कसैले ल्याएर मात्र आउने होइन । समय भन्दा अगाडी कोही कतै जान सक्दैन । यो गणतन्त्र मैले ल्याएको भनेर कुनै पाटि र नेताले जस लिने कुचेष्टा नगरे हुन्छ । गणतन्त्रसंग बेचिएको लाखौनागरिकता, सुस्ता, कालापानि, महाकाली, नेपालीपनका ति अमनचयन, शान्ति, विश्वास र प्रेम अब कुन पाटि र नेताले यो देशमा फिर्ता दिन सक्छन् ? विश्वको शान्ति प्रिय देश र जनताको शिर काट्नेहरु नै राष्टीयताको भाषण गर्न रतिभर लाज मान्दैनन् जे जती शहिद भए ति सबै नेपाली थिए । के शहिदहरुले बाँके बर्दिया कैलाली कन्चनपुर र्सलाहि धनुषा मधेस राज्य बनाउने भनेर युद्ध गरेका थिए ? शहिदको ईच्छा र चाहना लत्याएर ब्यत्तिगत स्वार्थ पुर्ति गर्ने महानुभावहरुले बुझ्नु पर्नेछ पन्ध्र बर्ष अघि र आजमा आकास र जमिन जस्तै फरक अवश्था छ । जनता शिक्षित भैसकेकाछन् । अब जनता हजुरहरुको खोक्रो जनवादि भाषण, नाचगान, आर्थिक प्रलोभन, डर, धाकधम्की र अराजक कार्य गर्दै राष्टीयता बक्नेहरुको इशारामा जीवन दान दिने छ्रैनन् । नेपाललाई बेच्ने छैनन् । नेपाली आमालाई टुक्रा गर्ने त कल्पना पनि नगर्नु होला । देश र जनताको लागी गर्नै चाहनु हुन्छ भने मोदीले झै आर्थिक क्रान्ति गर्नु जसले देश र जनताको हितहोस् । अबका शिक्षित नेपालीहरुले गलत गर्नेहरुको जीवन लिन सक्छन् । गाँउमा भोट माग्न आउँदा बहुरुपी नेतालाई काट्न सक्छन् । अरु देशमा झै क्रान्तिमा अब गरिब नेपालीले गरिब नेपाली मार्नेछैनन् । आम नेपालीहरुले हर नेता र पाटि चिनीसकेकाछन् । हिजोका सिधासाधा नेपालीलाई भूmक्काए झै आजका आम नेपालीहरुलाई झूक्याउछु भन्ने नेताजीहरुले नठान्नु होला । पाटी, नेता, धर्म र जात जन्मदा हामीले लिएर आएका थिएनौ । यो त यहाँका शिक्षित भन्ने ब्यक्तिहरुले ब्यक्तिगत इच्छा आफ्नो भोगविलासको लागि निर्माण गरेका संस्कार र रितीरिवाज हुन् । सबै संस्कार र रितीरिवाज नराम्रा भने छैनन् । धर्मको नाममा नराम्रा रितीरिवाज, छुवाछुत, असमानता र जातिवादको अन्त गर्न गरिएको क्रान्तिमा हामी आम जनताको साथ थियो । हामी कुनै पाटीका मान्छे होइनौ । हामी नेपालमा जन्मीएका नेपाली हौ । हाम्रो देश नेपाल हो । हाम्रो पहिचान नेपाली भाषा हो । नेपाली झण्डा हो । गाई हो । डाँफे हो । दौरासुरुवाल हो । ढाका टोपी हो । हिमाल हो । पहाड हो । तराई हो । विश्वमा एक मात्र स्वर्ग छ त्यो नेपाल हो । यसलाई टुक्रा गर्ने दुषप्रयास नगर्नु होला जसको मूल्य चुकाउदा आफनै अस्तित्व समाप्त हुन सक्छ ।स्वयम मानव भित्र आत्ममा रहने भगवानलाई मुर्तिमा देखाएर सोझासिधा मानवलाई मन्दिरमा पैसा चढाउन लगाउदै धर्म र भगवानको नाममा चलाख मावनले आफ्नो झोली भरेझै आजका केही पाटि र नेताहरु सबिधान संसोधनको नाममा नेपाल र नेपालीलाई आँखामा धुल छर्न खोज्दैछन् । प्रन्ध बर्ष अगाडीका नेपाली र आजका नेपालीबिचको दिक्षान्तलाई खै यि शिक्षीत नेताजीहरुले कसरी मुल्यानकन गर्दैछन् । जन्मजात हामी नेपाली, नेपाली नै रहन्छौं । नेपाली जनताले राष्ट र राष्टियताको लागी पाटि परित्याग गर्न सक्छ । आप्mनो स्वाभिमान बेच्न सक्दैन । विश्वको विर गोर्खाली शिर झुकाउन सक्दैन । बरु राष्ट र राष्टीयताको लागि जीवनदान दिन सक्छ । साम्राज्यवादसंग लड्दै नेपाल र नेपालीको पहिचान दिने बेला यि बाहिरका पाहुनाहरु कहाँ थिए ? कुन अधिकारको कुरा गर्दैछन् ? विरगोर्खालीले नालापानि र काँगडाको इतिहास दोहोराउन सक्छ । हिन्दी भाषा जसलाई चाहिएको हो उहाँहरु उतै गएर बोल्न र बस्न सकनुहून्छ । यो स्वाभिमानी स्वतन्त्र नेपाल हो । उहाँहरुलाई स्वतन्त्रता छ । आमाको कोखबाट जन्मिएको बच्चालाई आफ्नोआमाको माया हुन्छ कि बाहिरबाट आएको झट्केलो छोराछोरीलाई ? जुन कोखमा उहाँहरु जन्मनु भएको हो उहाँ त्यहि जान उहाँहरुलाई स्वतन्त्रता छ । हामी उहाँको जन्मघरमा गएर हाम्रो अधिकार त मागेकाछैनौ । सोनिया गान्धि किन प्रधानमन्त्रि बन्न सकिनन् ? कति लाख नेपाली सदिऔंदेखी भारतमाछन् खै तिनीहरुको नागरिकता पाएका ? खै यि नेताहरुले आवाज उठाएका ? बिसौं बर्ष भारतमा बिताएका नेपालीहरु धन सम्पती मात्र होइन आफ्नो अस्मिता लुटाउदै फर्कन बाध्यछन् तर यहाँ यि शिक्षीत हाम्रा अग्रज नेताहरुले नेपाली नागरिकता कस कसलाई दिएनन् ? त्यसको प्रतिफल के भैरहेको छ ? अग्रज अति शिक्षीत ले गल्ति गरे पनि खै युवा नेता र पाटिहरुले सोचेका ? यि अति शिक्षीतहरुलाई नेपाल र नेपाली जनताका पाटि र नेता हुन भन्न पनि लाज लाग्ने अवश्था आईरहेकोछ । पाँच बिकास क्षेत्र नै काफि छ विकासको मुल फोर्नेहरुलाई अँचल जिल्ला नगरपालिका गाविस र बडा नै काफि छ अधिकार र क्षेत्र तोक्नलाई । राम्रो काम र बस्तु फेर्नु पर्दैन बरु नेताहरुलाई आफ्नो आचरण फेर्न अति आवश्यक छ ।भगवान छैन भन्नेहरुलाई कसले पैदा गर्यो ? प्रकृती प्रदान भन्छन् । प्रकृती नै भगवान हुन् । स्वयम हामी मानव भित्र आत्मासंग देवको वास छ । यो श्वास कसैले देख्दैनन् । प्रकृती अदृष्य छ । मृत्युको दिन शरिर रहन्छ । देवले आत्मा लिएर जान्छन् । जीवन जन्म र मृत्यु बिचको परिक्षा हो । जुन कार्य गर्दा पनि भित्र आत्मले थाह पाउँछ । मनले सोध्छ ? एकमनले गलत नगर भन्छ तर यो लोभ मोह क्रोध इष्र्या डाहले गर्न लगाउँछ । भष्टचार गरेर कमाएको कालो धन कसको लागी ? कसले लान्छ ? मैले जन्माएको छोराछोरीको लागी भन्नु हुन्छ भने तपाईले छोरा चाहदा छोरी जन्मीएकीछिन् । छोरी चाहदाँ छोरा जन्मिएकाछन् । हामि मानवको हातमा केहि छैन । दिने पनि उहि छ र लिने पनि उहि छ । जन्माउने पनि उहि हो यहाँ रहदा दिने पनि उहि हो र लाने पनि उहि हो । हामी हाम्रो भन्छौ । हाम्रो भन्नु र गर्नु केहि छैन । हाम्रा अग्रजले कुन धन सम्पती लिएर जानु भयो ? केवल आफुले गरेको कर्म लिएर जाने हो । हामी कहाँ किन अन्धकारमा रुमल्लिरहेछौ, भ्रष्टचार गरिरहेछौ । असल सस्कार र रितीरिवाज आफ्ना सन्तानलाई दिनु हर मानवको कतव्र्य हो । आफ्नै घरमा कतव्र्य र कर्म भुलेर हिड्ने मानवले देश र जनतालाई के दिन सक्छन् ? हामी आफ्नै छिमेकीले मार्छ कि भनेर डराईरहेछौ । भ्रष्टचार गरेर कमाएको भन्दिछ कि भनेर कापिरहेछौ । जन्म र मृत्यु पहिल्यै तय छ । हे नेता जी तपाईहरु के को लागी बाँच्न चाहनु हुन्छ ? भगवान छैन भन्ने नेताहरु , तपाईले भष्टचार गर्दा देख्ने स्वयमको तपाईको आत्मा को हो ? त्यहि स्वयम हजुरहरुको आत्मा साक्षि छ । एकान्तमा बसेर एक पल्ट सोच्नुस् । एक मन त पाप हो भ्रष्टचार गर्न हुन्न भन्छ तर अर्काे मनले हात थाप्छ । तपाईहरुसंग राक्षस पनि छ र देव पनि छ । हजुर जसलाई रोज्नु हुन्छ हजुरहरु त्यहि बन्नु हुन्छ । मानव कल्याण नै धर्म हो तर रगतको होली खेलेर क्रान्तिको नाममा राष्ट्रियताको खोक्रो नारा अधिकार स्वतन्त्रता र जात धर्मको नाममा नेपाली दाजुभाईलाई नलडाउनू होला । आज जसको प्रतिफल स्वयमले भोगिरहनु भएको छ । हिजोको इज्यत र मान प्रतिष्ठा आज कहाँ पुग्यो ? भोली त्यहि पनि नरहला । हजुरहरुले आफ्ना आमा बाबालाई महत्व दिनु भएन जसको प्रतिफल तपाईका छोराछोरीहरुले हजुरहरुलाई उत्तर दिई रहेकाछन् । तपाईहरु आफु भित्र रुदै बाह्य हाँसो देखाई रहनु भएको छ । खालिहात आएको तपाईसंग आलिसान बगला गाडी बिदेशमा पैसा होला तर हिजोेको नेपालीपन आत्मसन्तुष्टि खै ? शान्ति खै ? प्रेम र विश्वास खै ? मनको शान्ति बिना सुख कहिल्यै आउदैन । पाप र धर्मको लडाई सधै भैरहन्छ । जित धर्मको हुन्छ । आज सबिधान संसोधन होइन कार्यन्वयन आवश्यकता छ । आम नेपाली अब देश र जनताको विकास र समृदि चाहन्छ । आर्थिक क्रान्ति चाहन्छ । तपाईहरुको फोहोरी चरित्र र राजनिती चाहदैन ।हामी देश र विदेशमा रहेका नेपाली विश्व हल्लाएका विर र्गोखाली का सन्तान हौ । आफ्नो अधिकार स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको लागि पाटि र नेताका गलत कदम प्रति सधैं चुप लागेर बस्न सक्दैनौ । आज पनि हामीलाई हाम्रा आमाबाबा झै अनपढ सोझासिधा सम्झिएर नेपाली आमाको अगं छुट्याएर कालापानी, नागरिकता, सूस्ता ईत्यादि बेचे झै र अझै बेच्न षडयन्त्र गरिरहेकाछौं । हामी विश्वको एक मात्र स्वाभिमानी र स्वाभिलम्बी नेपाली हौ हाम्रो शिर पराई सामु कहिल्यै झुक्दैन । नेताहरु आफ्नो पद र भ्रष्टचारको कालो धन बचाउन र छिपाउन आफ्नै नेपाली आमा बेच्न तयार हुन बाध्यता होलान् तर नेपाली जनतालाई छैनन् । सबिधान संसोधन र पाँच नम्बर क्षेत्रको विखण्डन नागरिकता दिने निणर्य किन र कसको लागी गर्न लागिएको हो ? लाखौ नेपाली सदिऔं देखी भारतमा बस्दै आएकाछन् । तिनलाई नागरिकता र अधिकार दिलाउन कुन नेता र पाटिले के पहल गरेकाछन् ? चौरानब्बेले पास गरेको सविधान आज छ प्रतिशतकोलागी संसोधन गर्ने यि अति शिक्षीतहरुको पछि लाग्ने युवानेताहरु नेपाली जनतासंग भोट माग्न आउन हजुरहरुलाई लाज लाग्ला कि नलाग्ला ? अब त्यहि छ प्रतिशतले हजूरहरुलाई भोट हाल्छन् होला । हैन र ? अब विदेशीको ईशारामा नेपालको सत्तामा बसेर गोटी चाल्नेहरुलाई भोलीको चुनावमा के को लागी हामी आम नेपालीले भोट दिने ? हे नेताजीहरु अब भोट माग्न आउने अधिकार आफु स्वयमसँग छ कि छैन सोध्नु होल । सविधान सभाबाट जसजसले यो संसोधनको पक्षमा भोट गर्छ तिनलाई नेपाली जनताले अब हुने चुनावमा धरौटीपनि जफत गराउने कुरामा दुई मत नरहला । जय देश जय जनता
प्रतिक्रियाहरु तपाईको प्रतिक्रिया HelloNepalKorea on Facebook विचारका थप शिर्षकहरु • डिप्रेशनले गाज्दैमा आत्माहत्या रोज्नु बेकार्छ• आमा भोट पाटीलाई हैन ब्यक्तिलाई दिने हो• आसन्न स्थानीय निर्वाचन;प्रतीक्षा र प्रतिफल:• सम्भावना बोकेको सगून• यसकारण मैले राजनीति छाडे • जीवनको बिग्रिएको फ्रोफाईल• कोरियाबाट एक नेपालीको नयाँ पार्टी साझा पार्टीलाई सन्देश • कोरियाको दश हजार कोटाले ल्याएको तरङ र वास्तविक्ता : • मेरो भोगाईमा जनयुद्ध • कोरियन नयाँ वर्ष सलनाल एक अनुभती• एनसिसिलाई ऐतिहासिक भुमिका निर्बाह गर्ने सस्थाको रुपमा बिकास गर्नु आबस्यक छ ।• बिदेशमा हुदा तिन वटा कोटबाट बच्नु आवश्यक छ• आरक्षण जातिय हैन, बर्गिय हुनुपर्छ • कोरियामा राजनीतिक कार्यक्रम बिरोध र समर्थनको शृङ्खला कि समिक्षा र सहकार्य • नदेखेका सपना हरु• कोरिया फेरि आउने कि, नेपाल मै केहि गर्ने ?• लोसारको शाब्दिक अर्थ र यसका प्रकार• मजदुर र किसानको साथी, नैतिकता र ईमान्दारिताको प्रतिमुर्ती रामचन्द्र दाई• किन बन्द हडताल चक्काजामको बिरोधी हो विवेकशील नेपाली दल • भारतको सफलता सँगै माओबादी पार्टीको अबको पतन जनमत